Banyere - Cloud Library
Ebe obibi - Banyere
Gbasara ọba akwụkwọ ojii (Cloud Library)
Mesinja intanashonal (Messenger International) nwere ọrụ doro anya zuru ụwa ọnụ iji mee ka ndị ụkọchukwu na ndị isi nweta akụ ndị a n’agbanyeghị ọnọdụ ma ọ bụ ọnọdụ ego. E mepụtara igwe ojii maka ebumnuche a. Ọ na-arụ ọrụ dị ka ebe a na-ekesa nkesa mba ofesi na-enye ohere ị nweta ihe ọ bụla a tụgharịrị ka e nwee ike ị lele ya ma budata ya.
Ebumnuche anyị bụ ime ka akụ ndị a dị n’asụsụ niile bụ isi, wee n’egosipụta ikike iru ihe karịrị 98% nke ndị niile bi n’ụwa. Oba akwụkwọ ìgwè ojii bụ otu ụzọ iji mezuo ebumnuche a. Gini mere i ji aju? N’ihi na akụ nke anaghị ahụ anya nwere ike ịdị ọtụtụ ma na-eme njem ngwa ngwa karịa akụ nke ahụrụ anya. Anyị na-atụ anya na ị ga-enwe aṅụrị n’ahụmịhe gị n’igwe ojii.
Sitere na ndị okike
Jizọs nyere anyị iwu ọ bụghị naanị ikwusa ozi ọma, kamakwa iji zụlite ndị na-eso ụzọ. Ozi ndị a ga-enyere gị aka ịghọ onye na-eso ụzọ Kraịst. Anyị na-etinye ego na ọzụzụ gị n’ihi na anyị kwenyere na gị na ike gị, site na amara nke Chineke, ịgbanwe ụwa nke mmetụta. Chineke etinyela ịdị ukwuu n’ime gị, Ọ chọkwara ịmara gị nke ọma. Ihe ndị a ga-enyere gị aka ịchọpụta mmekọrịta dị n’etiti gị na Chineke. Dika I na-eto na mmekorita gi na Kraist, I ga-agbanwe site n’ike nke Okwu ya.
Chineke kere gị maka ebumnuche pụrụ iche n’onyinye gị yana ike gị. Anyi na-agba gi ume ka ichoputa ozuzu oké nke ihe nile Chineke nwere n’ebe ị no. Ekpere anyi bu ka ihe ndi a kwadoo gị maka njem nchoputa.
Ngọzi dịrị gị na nke gị,
John na Lisa Bevere
Obi gị ọ na-ere ọkụ ịhụ ka a na-ekesa ihe ndị na-agbanwe ndụ n’ụwa niile? Ọ bụrụ n’inwere mmasị ịkwado ebumnuche nke oba akwụkwọ igwe ojii , biko zite ozi intaneti getinvolved@cloudlibrary.org. Anyi n’ekele gị n’odi n’iru maka ekpere na nkwado gị!